आदित्य नारायण झा आज आफ्नो ३३ औँ जन्मोत्सव मनाउँदै - नेपाल कुरा
आदित्य नारायण झा आज आफ्नो ३३ औँ जन्मोत्सव मनाउँदै
प्रकाशित मिति: २२ श्रावण २०७७, बिहीबार , संवाददाता: Yukta
काठमाडौं । बरिष्ठ गायक उदित नारायण झा तथा दीपा नारायण झाका छोरा आदित्य नारायण झा आज अगष्ट ६ का दिन आफ्नो जन्मदिन मनाउँदैछन् । जन्मदिनको पूर्व सन्ध्यामा गत मध्यराति नै आदित्यकी आमा दीपाले फेसबुकमा केही पोस्ट गर्दै आदित्यलाई जन्मदिनको शुभकामना व्यक्त गरेकी छिन् ।
विकिपेडियाका अनुसार आदित्यको जन्म सन् १९८७ को अगष्ट ६ का दिन भएको हो । यस अनुसार आदित्य आजदेखि ३३ वर्ष पुरा भएका छन् । गायक बुवा तथा गायिका आमाका छोरा आदित्य बाल्यकालदेखि नै बाल गायक तथा बाल कलाकारको रुपमा बलिउडमा सक्रिय छन् ।
आदित्यले चार वर्षको उमेरमै पाश्र्व गायनमा डेब्यू गरिसकेका थिए । यद्यपि, आदित्यलाई गायकको रुपमा भन्दा टेलिभजिन कार्यक्रम सञ्चालको रुपमा दर्शकले बढी मन पराएका छन् ।
अभिनेता ऋतिक रोशन र कंगना रनौतको इमेल घटनाले फेरी विवादको रुप लिँदै !
फिल्म ‘लुटकेश’ को ट्रेलर बिवादमा ! नेपाली फिल्मको कथा चोरेको आरोप (भिडियो)
आखिर किन टकलु भइन् नायिका केकी अधिकारी ?